चितवनको माडीमा माओवादी केन्द्रका ढकालले जिते, कुन वडामा कसले बाजी मारे ? - Naya Patrika
चितवनको माडीमा माओवादी केन्द्रका ढकालले जिते, कुन वडामा कसले बाजी मारे ?
चितवन माडी नगरपालिकाको अन्तिम मतपरिणाम आउँदा नगर प्रमुखमा माओवादी केन्द्रका ठाकुरप्रसाद ढकाल विजयी भएका छन् । अन्तिम सम्म नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिइरहेको माडिमा ढकालले अन्तिम समयमा आएर ४४ मतले विजय हाँसिल गरेका हुन् ।
उनले ३ हजार ८ सय ७३ मत ल्याए भने निकटतम प्रतिद्धन्द्धी नेपाली कांग्रेसले ३ हजार ८ सय २९ मत ल्याएको छ । उपप्रमुखमा भने नेकपा एमालेका ताराकाजी महतो विजयी भएका छन् । उनले ४ हजार ६ सय ९० मत ल्याए ।
माडीका ५ वडामा प्यानल सहित एमालेले जितेको छ । एमालेका तर्फबाट वडा नम्बर ९ मा शिवहरी सुवेदी, ८ मा कृष्णराज अधिकारी, ७ मा बालकृष्ण सापकोटा, ६ मा भरत गुरुङ, ३ मा पुरण महतो वडाध्यक्षमा जितेका छन् । माडीका ३ वडामा माओवादी केन्द्रले प्यानल सहित जितेको छ ।
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट वडा नम्बर ५ मा रामबन्धु पोखरेल, ४ मा चन्द्रदिप महतो, २ मा इश्वरी ढकालले वडाध्यक्षमा जितेका छन् । वडा नम्बर १ मा कांग्रेसका कृष्ण पौडेल विजयी भएका छन् । माडीमा १६ हजार ३७१ मत खसेको थियो । वडा नम्बर १ मा २ हजार ४७० मत खसेको थियो ।